အသက် ၃၈ နှစ် - ED သည် ၁၀ ပတ်အတွင်းပျောက်ကင်းသွားသည် - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်порно
အသက် ၃၈ နှစ် - ED သည် ၁၀ ပတ်အတွင်းပျောက်ကင်းသွားသည်
ကျွန်တော့်အဖြစ်အပျက်ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းမှာစတင်ခဲ့တယ်။ သုံးနှစ်တာကာလအတွင်း ED နဲ့ငါဆက်ဆံခဲ့ရတယ်။ လူတစ် ဦး ၏မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှုအပေါ်လုံးလုံးလျားလျားထိုးနှက်ချက်အကြောင်းပြောဆိုပါ။ ဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကငါ့ဆရာဝန်ကသွေးလုပ်ပြီးငါ့မှာဘာအပြစ်မှမရှိပါဘူး။ ကျွန်တော့်သွေးပေါင်ချိန်ကပြီးပြည့်စုံတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ testosterone ဟော်မုန်းအဆင့်များသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။ ငါကြီးမြတ်ပုံသဏ္inာန်၌ရှိ၏ သူက Lavitra ကိုညွှန်ကြားခဲ့ပြီးစိတ်မပူပါနဲ့လို့ပြောတယ်။ သုံးနှစ်ကြာတော့ငါဒီဟာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်။ ဆေးလုံးနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်စီစဉ်ခြင်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုမတက်နိုင်ခြင်း။ ဒါကကျွန်မရဲ့လိင်ဘဝမှာအနိမ့်ဆုံးပဲ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှာတော့ငါလိင်ဆက်ဆံတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချလိုက်တယ်။ သိသာထင်ရှားတဲ့ငါ၌ပြissuesနာများရှိသည်နှင့်ကိုယ့်တစ်စုံတစ် ဦး နှင့်ချိန်းတွေ့စတင်မှီတိုင်အောင် - ငါတော့ဘူးကကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းချင်ကြဘူး။ ဟုတ်ပါတယ်, ဆေးလုံးမပါဘဲငါပြproblemsနာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဆရာဝန်ကိုထပ်ထပ်တွေ့တော့သူကငါ့ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှာသူ့ကိုတွေ့တော့အကြံပေးတယ်။ ED နှင့်အတူတစ် ဦး က 2013 နှစ်အရွယ်? ငါ့အတွက်ပြtheနာကပိုများရမယ်။ ဒါပုံမှန်မဖြစ်နိုင်ဘူး
ထိုအခါငါဒီ site ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ 15 ရက်နေ့တွင်အပြည့်အဝ PMO စတင်ခဲ့သည်။ ငါ PMO အပြည့်ကိုလေးပတ်လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာညစ်ညမ်းမှုနဲ့တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုရှောင်ရှားခဲ့တယ်။ ငါနောက်ဆုံးတော့ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ် (ကတည်းကအကြိမ်ပေါင်းများစွာ) ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်လိင်ဆက်ဆံရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ငါလုံးဝပြန်လည်ကောင်းမွန်နေပါတယ်ဟုပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး! တကယ်တော့ငါကအရမ်းရယ်ရတယ် flaccid စောင့်ရှောက်ခြင်း, ရှာတွေ့ပါတယ်။ ငါလိင်နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်ဘဝအကြောင်းကိုငါဘယ်လိုခံစားရသည်နှင့်ပတ်သက်။ လုံးဝတိုးတက်မှုအကြောင်းပြောဆိုပါ။
ဤအခြေအနေတစ်ခုလုံးနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်အနှောင့်အယှက်အရှိဆုံးအပိုင်းမှာဆရာဝန်များကဤပြproblemနာကိုသတိမပြုမိပုံနှင့် Viagra / Lavitra ကိုမျက်စိကန်းစွာသတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီဆေးလုံးကစျေးပေါတယ်။ ဒီနေရာမှာငါဘယ်တော့မှ porn ကိုပြန်သွားတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ ငါယခုနှစ်ရဲ့အစမှာ, ဒါမှမဟုတ်လွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကပင်ပြန်ပုံကိုပြန်သွားဖို့စဉ်းစားရုံငါ့ကိုရှုပ်ထွေးစေသည်။
မေလ 10, 2013
LINK - Recovery ကို, အောင်မြင်ဖြည့်စွက်!